Torohevitra momba ny 10 LinkedIn momba ny fahombiazan'ny tambajotra | Martech Zone
Alahady Oktobra 11, 2015 Alahady 15 Janoary 2017 Douglas Karr
Ity infographic avy amin'ny SalesforLife ity dia mifantoka amin'ny fomba hanatsarana ny mombamomba ny LinkedIn amin'ny fivarotana. Raha ny fahitako azy, ny mombamomba an'i LinkedIn rehetra dia tokony hohatsaraina amin'ny fivarotana… raha tsy izany, maninona ianao no ao amin'ny LinkedIn? Ny sandanao amin'ny asanao dia manan-danja ihany tahaka ny tamba-jotra matihanina.
Izany dia nilaza fa mino aho fa maro ny olona manimba amin'ny alàlan'ny fanararaotana ny lampihazo na tsia manatsara ny mombamomba an'i LinkedIn. Fomba iray tena tiako hatsahatra ny manandrana mifandray amin'ireo olona tsy fantatrao. Fantatro fa mitady hampitombo ny tamba-jotra ianao, fa ny fanasana tsy misy no tsy antony hanaovana izany. Mifandraisa amiko amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy, alaivo resaka, ampahafantaro ahy ny antony mety maha-sarobidy ny fifandraisana aminao - ary azo inoana fa hifandray aho!
Ny mombamomba anao LinkedIn dia tsy tokony ho famerenanao - tsy momba ny zava-bitao na momba ny nanorotoroanao ny quota. Fa kosa tokony ho ivon'ny mpanjifa izy io, mifantoka amin'izay lanja azonao omena an'ireo mety ho vinavinan'ny mpividy. Valio ity fanontaniana ity: ahoana no fomba hanampiako ny mpividy ahy? Ity ny fomba fanamboarana ny profil LinkedIn tonga lafatra ho an'ny fivarotana ara-tsosialy.
Ahoana ny fomba hanatsarana ny mombamomba anao LinkedIn
Sary tena izy - Tsy mifandray amin'ny sary mihetsika na sary banga aho. Ny tavanao no endrika ekena fantatrao indrindra, apetraho amin'ny Internet. Lehilahy volondavenona, antitra ary matavy aho… mbola napetrako tamin'ny Internet ny sariko.
Ny lohateninao - Ny lohateny toerana dia tsy manome ny sanda entinao ho an'ny hafa. Aza miondrika an-tsambo ary azafady aza mametraka milionera.
Mamoaka atiny - Omeo atiny mifandraika amin'ny mpitsidika izay hahafahan'izy ireo mamantatra ny fahaizanao ao anatin'ny indostriao.
Poloney ny famintinana nataonao - Nahasarika ny sain'izy ireo ny lohateninao, tonga izao ny fotoana hanomezana loko vitsivitsy sy antso ho amin'ny hetsika.
Mizarà votoaty hita maso - Rehefa mizaha ny pejinao ny mpitsidika dia manomeza atiny maso mahaliana ary manavaka ny mombamomba anao amin'ny hafa.
Fanandramana amin'ny valiny - Ny tantaram-piasanao dia tsy dia misy dikany firy amin'ireo valiny azonao.
Endorsements - Na dia be mpampiasa sy ambanin-javatra loatra aza izy ireo dia tsy mahasarika maso ny mombamomba azy tsy misy fanamafisana. Raiso ny anao!
tolo-kevitra - Tsy toy ny fanamafisana, ny mpiara-miasa mandany fotoana amin'ny famolavolana tolo-kevitra mendrika dia sarobidy tokoa.
Manampy famoahana - Mizara sy manoratra amin'ny toeran-kafa ve ianao? Aza hadino ny manampy ireo fizarana ireo amin'ny mombamomba anao LinkedIn hahafahan'ny mpitsidika mahafantatra ny fahaizanao manokana.
Voninahitra sy mari-pankasitrahana - Miaina amin'ny tontolo iray misy ny fiarahanareo ara-tsosialy sy ara-tsosialy no zava-dehibe amin'ny famaritana hoe olona iza ianao. Raha fantatrao dia zarao.
Aza hadino ny mijery ny mombamomba anao araka ny fahitan'ny besinimaro sy ny fifandraisana mba hahafahanao manatsara sy manatsara ny mombamomba anao. Amin'ny lafiny ankavanana, LinkedIn dia manome refy ny tanjaky ny mombamomba anao… ampiasao! Tiako koa ny manavao ny famandrihana karama amin'ny LinkedIn. Ankoatry ny fanavahana ny mombamomba anao sy ny fampitomboana ny fahitana azy dia manome fitaovana tsara izy io hamantarana hoe iza no mahita ny mombamomba anao sy ny fomba ahafahanao mifandray amin'ireo hafa.
Tags: Sary torohayatiny linkinfanekena linkintraikefa mifandraylohateny mifandraylinkin fanatsaranasary mifandrayprofil linkintolo-kevitra linkinvarotra mandritra ny fiainanasalesforlife